UPitso uzoqhudelana neqembu lakhe laphambilini i-Mamelodi Sundowns | Scrolla Izindaba
UPitso uzoqhudelana neqembu lakhe laphambilini i-Mamelodi Sundowns
Akusona isibhamu esihamba phambili esinamavolovolo ekuseni – kodwa kusondele impela!
UPitso Mosimane uzogcina edlala neqembu lakhe langaphambili, i-Mamelodi Sundowns.
I-Al Ahly kaMosimane izokwamukela i-Downs emlenzeni wokuqala wama-quarterfinal e-CAF Champions League ngoMosimane ebuyela e-Tshwane okokuqala selokhu asula esikhundleni ngoMandulo.
UMosimane uhlaze i-Al Ahly kulo mqhudelwano emuva ngowezi-2019 eyishaya ngo ngamagoli amahlanu eqandeni e-Tshwane. Manje ubuya ngomdlalo ofanayo kodwa kulokhu uzobe ehleli ohlangothwini oluphambene.
UMosimane uchithe iminyaka eyisishiyagalombili kwi-Downs kanti abaqeqeshi abalandelayo, uManqoba Mngqithi, uRulani Mokwena noSteve Komphela, abakasishintshi kakhulu isitayela sokudlala se-Downs.
Ngemuva kokuthi uMosimane esho phambilini ukuthi amaqembu azofuna ukugwema ukudlala neqembu lakhe esigabeni somkhumulajezi.
UMokwena, ongenamahloni okuveza umbono wakhe, ubuyisele inselelo kumqeqeshi wakhe wangaphambili ngesikhathi etshela abezindaba ethi: “Uma umqeqeshi uPitso ethembekile ngempela, angicabangi ukuthi ufuna ukudlala ne-Sundowns kuma-quarter final.”
Lo mqhudelwano wama-quarter-final wenziwe ngoLwesihlanu ntambama lapho womathathu amaqembu aseNingizimu Afrika adlala emiqhudelwaneni yawo ye-CAF egcine etholile ukuthi yiziphi izimbangi zawo. I-Kaizer Chiefs iqale ukudlala kowamanqamu yaqhathwa ne-Simba yase-Tanzania kanti Amakhosi adlala ekhaya kuqala.
Izibopho zomlenze wokuqala we-Champions League zizoba ngomhla ziyi-14 nomhla ziyi-15 kuNhlaba lapho imilenze yokubuyela ihlelelwe umhla zingama-21 kuya kumhla zingama-22 kuNhlaba.
Khonamanjalo, i-Orlando Pirates inikwe izimbangi ezinzima izinkunzi zase-Morocco i-Raja Casablanca kwi-quarter-final yabo ye-Confederation Cup. IBucs izokwamukela abadlali base-Morocco mhla ziyi-16 kuNhlaba.
Umdwebo ophelele we-Champions League kuzobe kuqhudelana
i-MC Alger ne-Wydad Casablanca, i-CR Belouizdad ne-Esperance
Umdlalo ophelele we-Confederation (imidlalo yomlenze wokuqala ngomhla ziyi-16 kuNhlaba nomlenze wesibili ngomhla ziyi-23 kuNhlaba)
I-CS Sfaxien vs i-JS Kabylie, i-Pyramids FC vs i-Enyimba FC, i-Cotonsport FC vs i-ASC Jaraaf
Umthombo wesithombe: @sabreakingnews